IMO oo dad ka qaadaysa Libya - BBC News Somali
IMO oo dad ka qaadaysa Libya
Image caption Afrikaan badan ayaa ka qaxaya Libya iyagoo ay noloshooda ay qatar ku jirto
Hay'ada socdaalka ee Adduunka IOM ayaa sheegtay in ay sare u qaadayso howlaha ay ku soo daadguraynayso Libya dadka ka yimid Afrikada ka hosayso saxaaraha sababta oo ah in intooda badan aysan dareensanayn in halkaasi ay ku nabad qabaan, waxayna dalbanayaan kaalmo. Tan iyo intii ay bilaabatay xasarada Libya ilaa 30,000 oo qofood oo ajnabi ah ayaa ka qaxay dalka Libya. Intooda badan waxay ka cabanaayeen in la ciqaabay oo la weeraray iyagoo looga shakisanyahay in ay calooshood u shaqaystayaal ay u ahaayeen Colonel Qadaafi.
Wariyaha BBCda ee Imogen Foulkes ayaa sheegay in dadka ka soo jeeda Afrikada Saxaaraha hooseysa ay waayeen shaqooyinkii ay halkaasi u joogeen. Afhayeen u hadlay hay'ada IOM, Jumber Umari Jumbe ayaa sheegay in dalabyada dadka ka imaanaayo ay badanayaan.
Toddobaadkan IOM ayaa bilowday inay diyaarado kaga qaado Tripoli 330 qof oo ka yimid Niger, laakiin markii ay waddankooda tagaan ayay noqonayaan lacag la' aan iyaga iyo reerkooda sababtoo ah waxay ku xirnaayeen lacagta ay ka soo shaqeeyaan Libya. IOM ayaa ku tilmaantay shaqaalaha ajnabiga inay yihiin dadka ay ku tiirsan tahay dhaqaalaha Libya. Waxay ka shaqeeyeen dhismaha, shidaalka iyo caafimaadka.
Lama hubo cidii samayn lahayd shaqooyinkii ay haayeen shaqaalaha ajnabiga ee ka badan saddex boqol oo kun ee ka tagay Libya. Laakiin waxaa cad in shaqooyinkan aysan hadda aan la siinayn ajnabi.